ကျနော်တို့ယနေ့ လက်ရှိ မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ ကားတွေမှာသုံးတာဟာ ဒိုင်နမိုလား? အော်တာနေတာလား? ဆိုပြီး အခေါ်အဝေါ်အမျိုးမျိုး ကွဲကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ မော်ဒယ်မြင့်ကားအားလုံးမှာ တပ်ဆင်ထားတာဟာ alternator ပါ။ Dynamo မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြင်လောကမှာတော့ အများနှုတ်ကျိုးပြီး ဒိုင်နမိုလို့ခေါ်နေကြတာပါ။